၏လူ ဦး ရေအချိုးအစား Martech Zone | Martech Zone
၏လူ ဦး ရေအချိုးအစား Martech Zone
စနေနေ့, ဧပြီ 10, 2010 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
ငါတို့ပြေးနေတာသတိထားမိလိမ့်မယ် လူစုလူဝေး ယခုခဏဘလော့ဂ်အပေါ်စစ်တမ်း။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကိုဖြေဆိုရန်သင်အချိန်ယူပြီးဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ရလဒ်များမှာအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ ဤတွင်အထူးပေါ်လွင်ချက်အချို့ကိုဖော်ပြထားသည် -
စာဖတ်သူများ၏ ၆၂.၅% မှာစာဖတ်သူများဖြစ်ကြသည် ကောလိပ်ဘွဲ့ရ, 21.9% ရှိသည် ဘွဲ့ရဒီဂရီ
စာဖတ်သူများ၏ ၆၂.၅% မှာစာဖတ်သူများဖြစ်ကြသည် အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်, 32.3% ဖြစ်ကြသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သော.
စာဖတ်သူအများစုမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်:
စာဖတ်သူအများစုမှာ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်များ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့။
စာဖတ်သူအများစုမှာ၌ရှိကြ၏ 34 မှ 44 အသက်အပိုင်းအခြား.
စာဖတ်သူများ၏ ၅၆.၃% သည်aအတန်ငယ်အနုတ်လက္ခဏာအလားအလာ စီးပွားရေးအပေါ်။
စာဖတ်သူတွေအများစုပါစေ $ 75k ကျော်, $ 150k အများအပြားအထက်သို့နှင့်အတူ.
စာဖတ်သူအများစုသည်အင်တာနက်ကိုသုံးကြသည် တစ်ပတ်ကို ၄၅ နာရီကျော်တစ်ပတ်ကို ၃၆ နာရီကျော်သုံးပုံတစ်ပုံကျော်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဝါဒအပေါ်အချို့သောသဘောထားများဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် - စာဖတ်သူတစ်ဝက်ကျော်ကသူတို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောခဲ့သည် သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင် နှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များပြောင်းလဲခြင်း။ စီးရီးစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် (စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ခုန်ချခြင်းကိုနှစ်သက်သောကောင်လေးတစ်ယောက်) သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါကစိတ်တူစာဖတ်သူတွေကိုဘလော့ဂ်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ဤလူ ဦး ရေစာရင်းများသည်ဘလော့ဂ်အားလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အသုံး ၀ င်မှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောနေရာဖြစ်သည်။
Google က Google Analytics Star ကိုသတ်ခဲ့သည်
ဧပြီ 10, 2010 မှာ 11: 36 AM
စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အချက်အလက်နှင့် tool ကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒေတာကောင်လေးအတွက်ဒေတာများ!